Oduu Simbirtuu! Jawaar fa’an Hoospitaala LandMark irraa gara mana hidhaa Qaallittiitti deebi’aniiru. | Kichuu
Posted on March 14, 2021 by kichuu_admin
Oduu Simbirtuu! Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa turtii guyyoota 12 booda Hoospitaala LandMark irraa gara mana hidhaa Qaallittiitti deebi’aniiru.
Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo waldhaansaaf Hospitaalaa geeffamanii turan, guyyaa 12 booda Hospitaala Laandimaark irraa baafamanii gara Mana hidhaa Qaallittii Zoonii 6ffaatti akka deebifaman maatiin OMN-tti himan.
Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Haamzaa Booranaa lagannaa nyaataa halkan 40’aaf taasisaniin, miidhama qaamaafi dhukkubaaf saaxalimanii akka turan, Dookterootaa akkasumas Abukaattoo hidhamtootaa dubbisuun OMN gabaasaa turuunsaa ni yaadatama.
Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin, lagannaa nyaataa guyyaa 40 booda, kadhaafi giddu seentummaa jaarsolii Biyyaatiin lagannaa adda kan kutan yoo ta’u, waldhaansaaf Hospitaalaa Laandimaark geeffamanii halkan 12’aaf yaalii fayyaa argachaa turaniiru.
Akka maatiin hidhamtootaa kanaa jedhanitti, Hospitaalli Laandimaark waldhaansa fayyaa akkaataa gaariin isaaniif taasisaa turee, sadarkaa bayyannachuu isaanii yoo dabalu, mana hidhaarraa gara Hospitaalaatti deddeebi’uun yaala akka hordofan beellamee jira.
Yeroo ammaa kanatti, Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Haamzaa Booranaa gara Mana hidhaa Qaallittiitti kan deebifaman yoo ta’u, haalli fayyaa isaaniis kan duraarra fooyya’a ta’uufi amma guutummaa guutuutti fayyummaan isaanii deebi’uufitti ammoo gara Hospitaalichaatti marmaaruun waldhaansa akka argataniif beellamni qabamuu OMN odeeffatee jira.
Diraamaan Abiyyi irratti barameera…!!
Abiyyi gaafiin European union fi USA’f “Ani humna hin qabu Waraana Eertiraa fi humna addaa Naannoo Amaaraa Tigraay keessa isin galaa baasaa” jadhee Abiyyi EU fi USA gaafate kufaa ta’eera…!! Waraana Eertiraas kan Amaaraas akkuma Naannoo Tigraay keessa galchitetti baasi jadhaniiniiru…!!
Addunyaa Kaadiree isaa kan Finfinneetti leenjisu itti fakkaate shawwaduuf yaale, diraamaan isaa harkatti fashalaa’eera..!!
Oduu Ammee:Obbo Baqqalaa Garbaa fedhii kiyya malee bakka mootummaan ofii barbaadetti hin waldhaanamu jechuun,